यस्ता छन् अंगुर खानुका फाईदा अवश्य जानिराखौं !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
यस्ता छन् अंगुर खानुका फाईदा अवश्य जानिराखौं !
काठमाडौं – यतिखेर अंगुरको सिजन छ । अंगु्र हेर्दा जति आकर्षक लाग्छ, उति नै धेरै छन् यसका फाइदा । कब्जियत, अपचदेखि मिर्गौला तथा मांसपेशीका समस्यासम्म अंगुरले फाइदा पु¥याउँछ । अंगुरको त बाहिरी फलमात्र होइन, भित्रको बियाँसमेत स्वस्थकर हुन्छ । अंगुरको बियाँले सुन्निने समस्या समाधान गर्छ भने मधुमेहका कारण आँखाको समस्या निम्तन दिँदैंन ।
के–के पोषण पाइन्छ ?
अंगुर पोलिफेनोस र फेनोलजस्ता फाइटोन्युट्रियन्ट्स, भिटामिन के, ए, सि र बी ६जस्ता भिटामिनको ठूलो स्रोत हो । यसका साथै यसमा थियामिन, रिवोफ्लाभिन, नियासिन, फोलेट र पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फोस्फोरस, सोडियमजस्ता मिनरल्स हुन्छन् । अंगुरमा फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एन्टीअक्सिडेन्ट, प्रोटिन, फ्लाभोनोइड पनि हुन्छन् । यी तत्वले उमेर वृद्धि गर्नुका साथै यसमा भएका उच्च पोषकतत्वले स्वस्थ र सक्रिय जीवन सुनिश्चित गर्छ ।
स्वास्थ्यमा के–के फाइदा गर्छ ?
यो स्वस्थकर हुनुका साथै स्वादिलो पनि हुन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यसले कब्जियत र अपचको समस्या हटाउँछ । यसका साथै यसले थकान हटाउँछ, मिर्गौलाको समस्या समाधान गर्छ, हड्डी स्वस्थ राख्छ, मोतिबिन्दु हुन दिँदैंन ।
अंगुरमा हुने पानीको मात्राले फोक्सोमा आद्र्रता बढाउने हुनाले यो दमका रोगीलाई पनि फाइदाजनक छ । यसमा तामा, फलामजस्ता सुक्ष्मपोषक तत्व हुने भएकाले हड्डी मजबूत पार्न सहयोग पु¥याउँछ ।
अंगुरले रगतमा नाइट्रिक एसिडको मात्रा बढाउँछ, जसले गर्दा रगत जम्न पाउँदैंन । यसले हृदयाघात हुने सम्भावना कम गराउँछ । एन्टीअक्सिडेन्टले खराब कोलेस्टेरोल (एलडीएल) को अक्सिकरणबाट बचाउँछ । बिहान–बिहान अंगुरको जुस पिउनाले माइग्रेन हुन पाउँदैंन र भएको अवस्थामा पनि निको हुन्छ । तर पानी नमिसाई पिउनुपर्छ । रेड वाइनले माइग्रेनको समस्या बढाउँछ भने अंगुरको जुस त्यसको समाधान मानिन्छ ।
यसका साथै अंगुरले मधुमेह नियन्त्रण गर्छ भने दाँत सड्नबाट समेत रोकथाम गर्छ, स्तन क्यान्सर, अल्जाइमर हुन दिँदैंन ।